कसरी नेटफ्लिक्स कास्ट गर्ने र सहायकलाई क्रोमकास्टमा सामग्री स्पोटिफाई गर्ने Androidsis
नयाँ गुगल होममा क्रोमकास्टमा गुगल सहायकसँग नेटफ्लिक्स र स्पोटिफाई सामग्री कास्ट कसरी गर्ने
मानुएल रामीरेज | | एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू, नि: शुल्क संगीत, ट्यूटोरियलहरू
गुगल होम नयाँ ईन्टरफेसका साथ अपडेट गरिएको छ र नाभिकताहरूको श्रृंखलासँग जुन गुगल पिक्सेल 3. को प्रस्तुतीकरणमा देखाइएको थियो। यी नवीनताहरूमध्येका लागि मेनूको सुधारिएको संस्करण हो। गुगल सहायकको साथ नेटफ्लिक्स र स्पोटिफाई सामग्री पठाउनुहोस्.
विशेष गरी क्रोमकास्टमा सामग्री पठाउन हामी Google सहायकलाई भन्न सक्दछौं: "बैठक कोठामा बिरानो चीजहरू खेल्नुहोस्"। यस तरिकाले, सहायक Chromecast उपकरणमा टेलिभिजन श्रृंखला पठाउनको लागि जिम्मेवार हुनेछ जुन हामीले «बैठक कोठा called बोलाएका छौं। गुगल सहायक को जादू यो हो कि तपाईं जहाँ तपाईं घरैमा दुई क्रोमकास्टहरू छन् यदि तपाईं अपरिचित चीजहरू कहाँ हेर्न चाहनुहुन्छ निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ।
1 नयाँ गुगल गृह
2 कसरी घर बनाउने र उपकरणहरू थप गर्ने
3 कसरी तपाईंको नेटफ्लिक्स र Spotify खाता घरबाट गुगल सहायकमा लिंक गर्ने
नयाँ गुगल गृह
गुगल गृह अनुप्रयोग अपडेट गरीएको छ विभिन्न फरक उपकरणहरूको ती सबै व्यवस्थापन गर्न कि हामी हाम्रो «जडान घर» मा छ। कोठामा बत्तीहरू बन्द गर्दै, नेस्ट थर्मोस्टेट टर्न अप गर्ने वा केवल नेटफ्लिक्स वा स्पोटिफाइ सामग्री बजाउनु हामी यो अनुप्रयोगको बनाउन सक्ने महान प्रयोगका स्पष्ट उदाहरणहरू हुन्।
यदि हामी थप्छौं भने गुगल होम हबको आगमन, हामी एक अनुप्रयोगको सामना गर्दैछौं जुन हाम्रो घरको सबै «गृह स्वचालन manage प्रबन्ध गर्न आवश्यक भन्दा बढि छ। यद्यपि यो नयाँ इन्टरफेस हो जुन हामीले घरबाट गर्नसक्ने सबै कुराको स्पष्टीकरण गर्दछ, जसरी यसले सहयोग गर्दछ लिंक मिडिया खाताहरू, गुगल सहायकको साथ Spotify र Netflix जस्तै।
त्यसैले हामी हाम्रो मनपर्ने श्रृंखला खेल्न Google सहायक पठाउँदै इच्छित सामग्री पुन: उत्पादन गर्न सक्दछौं। हो, मलाई थाहा छ हामीसँग अटो पावर अन समारोहसँग टेलिभिजन छसाधारणतया, जब हामी घर पुग्छौं र त्यो आवाज आदेश भन्छन्, टिभी हाम्रो मनपर्ने श्रृंखला सुरू हुन सुरू हुन्छ। फेरि गुगलको जादू उठ्दछ, जस्तै पिक्सेल group समूहको सेल्फी फोटोहरूका साथ अनि त्यो रातको फोटोको लागि फ्ल्यास बिना रात दृश्य मोड.
कसरी घर बनाउने र उपकरणहरू थप गर्ने
तपाईं अब गुगल होमको अपडेट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ईन्टरफेस र अन्य प्रकार्यहरू जस्तै स्मार्ट नियन्त्रणहरू र सदस्यहरू थप्नको लागि सिर्जना गरिएको 'घरहरू' मध्ये एकमा नयाँ सुविधाहरूको साथ। अब देखि तपाइँ संग छ घरहरू बनाउने र बिभिन्न उपकरणहरू थप्ने सम्भावना ती "घरहरू" सिर्जना गरियो। यसले तपाईंको सम्पूर्ण "जोडिएको घर" लाई व्यवस्थित गर्न सजिलो बनाउँदछ।
हामीलाई Room बैठक कोठामा बिरानो चीजहरू प्ले गर्नुहोस् «कमाण्ड प्रयोग गर्नको लागि, हामीले बैठक कोठाको लागि क्रोमकास्ट उपकरण कन्फिगर गर्नुपर्दछ। "हाउस" भनिने सिर्जना गरिएको घरमा। यो पहिले नै पूर्वनिर्धारित रूपमा आउँदछ, त्यसैले तपाईं यी चरणहरू छोड्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंसँग यो जस्तै कन्फिगर गरिएको छ भने।
हामी «Add» मा जाँदै छौं।
«गृह सिर्जना गर्नुहोस् on मा क्लिक गर्नुहोस्।
हामी हाम्रो नाम "हाउस" मा राख्छौं।
हामी अब जाँदैछौं बिभिन्न उपकरणहरू तोक्न को लागी कि हामीले स्थानीय Wi-Fi नेटवर्कसँग त्यो «हाउस» सिर्जना गरेको जडान गरिएको छ:
उपकरणमा क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईंले आफ्नो «Home to मा जडान गर्नुभयो।
हामीसँग छनौट गरिएको घर हामी छान्छौं र यसलाई थप्दछौं।
सम्झनुहोस् कि तपाईं जहिले पनि उपकरणका लागि घर को सेटिंग्स बाट चयन गर्न सक्नुहुनेछ।
कसरी तपाईंको नेटफ्लिक्स र Spotify खाता घरबाट गुगल सहायकमा लिंक गर्ने
हामी गृह अनुप्रयोग खोल्छौं र हामी मुख्य कन्फिगरिंग हेर्नेछौं जुन घर र यसको उपकरणहरू कन्फिगर गरिएको छ।
हामी थिच्दछौं बटनमा «सेटिंग्स».
अब समय «मल्टिमेडिया प्लेटफर्म खाताहरू"।
हामीले लिंक गर्न सक्ने विभिन्न खाताहरू यहाँ देखा पर्नेछ।
हामी यस अवस्थामा प्रयोग गर्दछौं स्पोटिफाई गर्नुहोस् ताकि तपाईं विभिन्न चरणहरू देख्न सक्नुहुनेछ.
Spotify मा + साइन इन क्लिक गर्नुहोस्।
हामी दुई स्क्रीनहरू पास गर्दछौं जहाँ हामीले ठीक क्लिक गर्नुपर्दछ र हामीसँग स्पोटिफाइ पहिले नै लिंक भएको छ।
यस तरिकाले हामी धेरै आदेशहरू प्रयोग गर्न सक्छौं:
बैठक कोठामा बिरानो चीजहरू खेल्नुहोस्.
हलमा ब्रुनो मार्स खेल्छ।
यदि हामी चाहन्छौं भने हाम्रो शयनकक्षमा एक श्रृंखला वा चलचित्र हेर्नुहोस् ("मास्टर बेडरूम" को रूपमा सेट गरिएको उपकरणको साथ):
मास्टर बेडरूममा अपरिचित चीजहरू खेल्नुहोस्।
र त्यसैले हामी दुबै Spotify र नेटफ्लिक्स मा गर्छौं भनेर गुगल सहायकको साथ हामी सामग्रीलाई गुगल गृहमा क्रोमकास्टमा पठाउन सक्छौं। जडित उपकरण प्लस सफ्टवेयरको एक श्रृंखला जुन हाम्रो स्मार्टफोनको साथ दिइएको अनुभवलाई माथि उठाउनको लागि प्रबन्ध गर्छ; कप्तान जससँग हामी हाम्रो सम्पर्कको घरलाई हाम्रो आवाजको आरामबाट प्रबन्ध गर्ने छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » नयाँ गुगल होममा क्रोमकास्टमा गुगल सहायकसँग नेटफ्लिक्स र स्पोटिफाई सामग्री कास्ट कसरी गर्ने
गुगल प्लेमा फर्कने समय के हो?
गुगल पिक्सेल of को 'नाईट साइट' मोडको साथ फ्ल्यास बिना रातको फोटोहरू लिने जादू